Enti Wiase Awieeɛ No Abɛn?
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mixe (North Central) Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Enti Onyankopɔn bɛma kwan ama nnipa ahyɛ wɔn yɔnko nnipa so saa araa, na wɔasan asɛe adesamma daakye? Dabida! Sɛnea yɛadi kan ahu no, Onyankopɔn de ne ho bɛgye nsɛm mu na wayi nnipa afi ɔhaw ne nhyɛso nyinaa mu. Nea ɔbɔɔ nnipa ne asase no pɛ sɛ wohu sɛ bere a ɔbɛyi nneɛma bɔne nyinaa afi hɔ no abɛn. Ɔkwan bɛn na ɔbɛfa so ayɛ saa?
Ma yɛnhwɛ saa mfatoho yi: Wo deɛ fa no sɛ wopɛ sɛ wotu kwan kɔ baabi a wonnim. Ebia wobɛdi kan abisa ahu nneɛma a ɛbɛkyerɛ sɛ woreyɛ adu baabi a worekɔ no. Enti sɛ worekɔ na wohu saa nneɛma no wɔ kwan so a, ɛbɛma wo koma atɔ wo yam sɛ woreyɛ adu. Saa ara nso na Onyankopɔn de n’Asɛm no ama yɛn na ama yɛahu nneɛma a ɛbɛsisi. Enti bere a yɛrehu sɛ saa nneɛma no resisi no, ɛma yɛhu paa sɛ wiase no awieeɛ abɛn.
Bible ma yɛhu sɛ nneɛma bɛgye nsam koraa ansa na awieeɛ no aba. Nneɛma a ɛbɛsisi saa bere no bɛyɛ nea ebi nsii da wɔ nnipa abakɔsɛm mu, na yɛbɛhu sɛ nneɛma ahorow resisi wɔ mmeaemmeae. Yɛnhwɛ nneɛma a Onyankopɔn Asɛm ka sɛ ɛbɛsisi no bi.
1. BASABASAYƐ A ƐREKƆ SO WƆ WIASE Nkɔmhyɛ bi a ɛwɔ Mateo ti 24 ma yɛhu nneɛma anaa nsɛnkyerɛnne ahorow bi a ɛbɛsisi wɔ wiase. Saa nsɛnkyerɛnne no na ɛbɛkyerɛ sɛ yɛwɔ “berɛ a ɛwɔ hɔ yi awieeɛ,” na ɛrenkyɛ “awieeɛ no bɛba.” (Nkyekyɛm 3, 14) Saa nsɛnkyerɛnne no bi ne akokoakoko, ɔkɔm, ne asasewosow a ɛbɛba mmeaemmeae. Afei nso, amumɔyɛfo bɛdɔɔso, nnipa dɔ ano bɛdwo na nyamesom akannifo bɛdaadaa nkurɔfo. (Nkyekyɛm 6-26) Ɛwom, ɛnyɛ nnɛ nko na nneɛma a yɛabobɔ din yi resisi. Nanso, sɛ wiase no rekɔ awieeɛ a, ne nyinaa bɛsisi bere koro no ara mu. Saa bere no ara nso, nsɛnkyerɛnne mmiɛnsa a ɛdidi so yi bɛsisi.
2. SUBAN A NNIPA DA NO ADI Bible ka sɛ, “nna a ɛdi akyire” anaa awieeɛ bere no mu no, nnipa suban bɛsɛe koraa. Yɛkenkan sɛ: “Nnipa bɛyɛ ahopɛ, sikanibereɛ, ahohoahoa, ahantan, wɔn a wɔka abususɛm, awofoɔ so asoɔdenfoɔ, bonniayɛfoɔ, wɔn a wɔnni nokorɛ, wɔn a wɔnni tema, wɔn a wɔntumi ne wɔn nyɛ apam, dinsɛefoɔ, wɔn a wɔntumi nni wɔn ho soɔ, wɔn a wɔyɛ werɛmfoɔ, wɔn a wɔmpɛ papa, wɔn a wɔyi afoforɔ ma, wɔn a wɔyɛ asobrakyeɛ, wɔn a wɔyɛ ahomasoɔ, wɔn a wɔdɔ anigyedeɛ sene Onyankopɔn.” (2 Timoteo 3:1-4) Ɛwom sɛ nnipa fii ase yii saa subammɔne yi adi akyɛ, nanso Bible ka sɛ “nna a ɛdi akyire” no mu deɛ ɛbɛgye nsam koraa, enti ɛka saa bere no ho asɛm sɛ ɛbɛyɛ “mmerɛ a emu yɛ den.” Wonhu sɛ seesei saa subammɔne yi agye ntini wɔ nkurɔfo mu paa?
3. WƆRESƐE ASASE NO Bible ka sɛ Onyankopɔn ‘bɛsɛe wɔn a wɔresɛe asase no.’ (Adiyisɛm 11:18) Dɛn na nnipa bɛyɛ de asɛe asase no? Bible ka nea nnipa yɛ de sɛee asase no wɔ Noa bere so no ho asɛm. Ɛka sɛ: “Na asase asɛe wɔ nokware Nyankopɔn no ani so, na na amumɔyɛ ahyɛ so mã. Onyankopɔn huu asase no, na hwɛ! na asɛe.” Enti Onyankopɔn kaa nnipa abɔnefo no ho asɛm sɛ: “Mɛsɛe wɔn.” (Genesis 6:11-13) Wohwɛ a wonhu sɛ adanse pii wɔ hɔ a ɛkyerɛ sɛ amumɔyɛsɛm anaa awudisɛm ahyɛ asase so mã? Afei nso, nnipa anya nkɔanim wɔ bɔne mu paa: Wɔayɛ nneɛma a wɔbɛtumi de asɛe asase no anaa apra nnipa nyinaa afi so koraa. Wɔwɔ akode pii. Nnipa resɛe asase no wɔ ɔkwan foforo so. Ɛne sɛ, nnipa de nkakrankakra resɛe mframa a yɛhome ne ɛpo, na wɔretɔre mmoa ne afifide ase, nanso saa nneɛma a wɔresɛe no no na ɛma yɛtumi tena nkwa mu.
Bisa wo ho sɛ, ‘Bɛyɛ mfe ɔha ne kakra a atwam ni no, so na nnipa wɔ nneɛma a wɔbɛtumi de atɔre wɔn ankasa ase?’ Nanso seesei, nnipa anya nkɔanim paa wɔ sɛnea wɔyɛ akode ahorow a ɛyɛ hu mu, na wɔn ani abere resɛe asase no. Nnipa anya nkɔanim wɔ mfiridwuma mu paa nanso nsunsuanso bɔne a ɛde aba no deɛ, wɔnhu sɛnea wɔbɛsi ano. Yɛnhyɛ no nsow sɛ nea asase yi bɛkɔ akɔwie deɛ, ɛnni nnipa nsam. Onyankopɔn de ne ho bɛgye nsɛm mu asɛe wɔn a wɔresɛe asase no ansa na nneɛma agye nsam. Onyankopɔn na waka!
4. WIASE NYINAA ASƐNKA ADWUMA Sɛnkyerɛnne foforo a ɛbɛma yɛahu sɛ yɛwɔ awieeɛ bere no mu ne sɛ adwuma titiriw bi bɛkɔ so. Bible ka sɛ, “Wɔbɛka ahennie ho asɛmpa yi wɔ asase so nyinaa de adi amanaman nyinaa adanseɛ; ɛno ansa na awieeɛ no bɛba.” (Mateo 24:14) Saa asɛmpaka adwuma yi deɛ ɛyɛ soronko koraa; ɛnte sɛ nea ɔsom ahorow pii ayɛ fi teteete no. Awieeɛ bere no mu no, saa “ahennie [no] ho asɛmpa” na wɔbɛka no titiriw. Wonim ɔsom bi a emufo ka saa ahenni no ho asɛm kɛse? Sɛ wonim ɔsom bi a wɔka saa asɛm no mpo a, wɔn dodow yɛ sɛn? Na wɔreka no wɔ wiase nyinaa “de adi amanaman nyinaa adanseɛ” anaa wo mpɔtam hɔ nko ara na wɔreka no?
Wɔreka Onyankopɔn Ahenni no ho asɛmpa wɔ kasa ahorow mu wɔ wiase nyinaa
Wɛbsaet a ɛne www.jw.org no rebɔ “ahennie ho asɛmpa yi” ho dawuru. Nwoma a ɛwɔ kasa bɛboro 700 mu na ɛwɔ Wɛbsaet no so a ne nyinaa twe adwene si ahenni ho asɛmpa no so. Wonim ade foforo nso a ama Ahenni no ho asɛmpa adu wiase baabiara no? Mfe pii ansa na Intanɛt reba no, na nkurɔfo nim Yehowa Adansefo sɛ wɔyɛ nnipa a wɔka Onyankopɔn Ahenni no ho asɛmpa. Efi 1939 reba no, Ɔwɛn-Aban biara a ɛbɛba no wɔakyerɛw anim “Ɛka Yehowa Ahenni Kyerɛ.” Nyamesom nwoma bi ka sɛ, ɛrekame ayɛ sɛ nyamesom kuo biara nni hɔ a yɛbɛtumi de wɔn atoto Yehowa Adansefo ho wɔ asɛnka adwuma a wɔreyɛ no ho; wɔnam akwan horow so reka asɛmpa no wɔ baabiara. Asɛmpa a wɔreka no ma yɛhu paa sɛ ɛrenkyɛ koraa Onyankopɔn Ahenni no bɛma ‘awieeɛ no aba.’
WIASE NO ADU AKYIRI PAA
Wonhyɛɛ no nsow sɛ nsɛnkyerɛnne anaa nneɛma nnan a Bible ka sɛ yɛbɛhu wɔ awieeɛ bere no mu no resisi? Bɛboro mfe ɔha ni, Ɔwɛn-Aban nsɛmma nwoma no ama wɔn a wɔkenkan no ahu nneɛma a ɛbɛsisi wɔ wiase sɛnea ɛbɛboa wɔn ma wɔn ankasa ahu sɛ awieeɛ no abɛn. Nanso, akyinnyegyefo bi nnye nni sɛ ɛyɛ nokware, na wɔka sɛ obiara bɛtumi abɔ ne tirim aka nea ɔpɛ. Wɔka nso sɛ, nnipa nkitahodi a ɛretu mpɔn nti na nkurɔfo anya adwene sɛ wiase no sɛe ara na ɛresɛe no. Ne nyinaa akyi no, nneɛma a ɛresisi no yɛ adanse a ɛkyerɛ sɛ wiase no adu akyiri paa.
Abenfo binom gye tom sɛ wiase no adu akyiri. Sɛ yɛhwɛ 2014 sei a, nyansahufo kuo nwoma bi de kɔkɔbɔ bi maa Amanaman Nkabom Ahobammɔ Badwa no sɛ nneɛma pii rekɔ so a ɛbɛtumi ama nnipa nkwa ho aba asɛm. Saa nyansahufo no kae wɔ nwoma no mu sɛ: “Nhwehwɛmu a yɛatɔ yɛn bo ase ayɛ no ama abɛda adi sɛ baabi a wiase no adu no ayɛ hu paa.” (Science and Security Board of the Bulletin of the Atomic Scientists) Seesei nnipa pii agye atom paa sɛ wiase no adu akyiri yie. Wɔn a wɔtintim Ɔwɛn-Aban yi ne wɔn a wɔkenkan no gye tom sɛ yɛwɔ wiase yi nna a edi akyiri no mu, na awieeɛ no abɛn pɛɛ. Nanso mma nea ɛrekɔ so no mmɔ wo hu, nya anidaso sɛ mmere pa bɛba. Dɛn ntia? Efisɛ awieeɛ no ba a, wobɛtumi anya wo ti adidi mu!
WƆYƐ ƆSƐE HO NKƆMHYƐFO?
Yehowa Adansefo nyɛ atemmu da ho nkɔmhyɛfo. Wɔaka nneɛma pa a ɛbɛba daakye ho asɛm akyerɛ nkurɔfo bɛboro mfe ɔha. Sɛ nhwɛso no, wɔyɛɛ nhyiam bi afe 1958 mu. Wɔ saa nhyiam no ase no, wɔmaa ɔkasa bi a n’asɛmti ne, “Onyankopɔn Ahenni Redi Tumi—Wiase Awieeɛ Abɛn Anaa?” Saa ɔkasa no ma ɛbɛdaa adi sɛ, “Onyankopɔn ahenni no ba a, ɛrensɛe asase no na mmom ɛbɛsɛe Satan wiase yi. Onyankopɔn ahenni no ba a, ɛrenhye asase yi, na mmom ɛbɛma Onyankopɔn apɛde ayɛ hɔ wɔ asase so sɛnea ɛyɛ wɔ soro. Ɛno nti, ɛho hia paa sɛ yɛhwɛ asase a Onyankopɔn de ama yɛn yi so yie, na Onyankopɔn nso bɛma no atena hɔ afebɔɔ.”
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN May 2015 | Awieeɛ no Abɛn?
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN May 2015 | Awieeɛ no Abɛn?